Wararkii ugu dambeeyay RW Rooble oo ku dhawaaqaya Golihiisa Wasiirada - Awdinle Online
Wararkii ugu dambeeyay RW Rooble oo ku dhawaaqaya Golihiisa Wasiirada
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen rooble in uu ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirada, waxaana socda diyaar garoowgii ugu dambeeyay.
Wararka ay heshay Shabakadda Wararka Awdinle Online ayaa sheegaya in ay macquul tahay in ilaa Caawa lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada Soomaaliya oo dad badan ay loolan adag ugu jiraan.
Ilo- Madax bannaan ayaa xaqiijiyay in Wasiirada xilalka siihaya ee Xukuumadii Kheyre ay soo laaban doonaan gaar ahaan kuwa saaxiibada dhow la ah Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa kulamo gooni gooni ah Madaxtooyada ku lahaa Madaxweyne Farmaajo, Guddoomiye Mursal & RW Rooble, iyada oo mid kasta uu doonayo in uu Xubno ku yeesho Golaha Wasiirada.
Previous articleShacab ku dhintay qarax ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Next articleDowladda Soomaaliya & QM oo heshiis cusub wada saxiixday